Izu a abụwo ihe na-atọ ụtọ dịka mụ na ụfọdụ ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ sitere na Salesforce na ụlọ ọrụ ọzọ na-arụ ọrụ iji hụ otu m ga - esi melite usoro izu maka ndị ahịa ha. Nnukwu ọdịiche dị na ụlọ ọrụ anyị ugbu a bụ na ụlọ ọrụ na-enwekarị mmefu ego na akụrụngwa, oge ụfọdụ nwere ngwaọrụ, mana anaghị enwekarị usoro iji kpochapụ atụmatụ ogbugbu kwesịrị ekwesị.
Ka ị na-enyocha oru ngo gị, ị nwere ike ịchọpụta ihe ndị na-efu, nkụda mmụọ, ma ọ bụ ndị na-adaghị adaba. Ikekwe ọ bụ usoro iheomume, ma ọ bụ ịnweghị ezigbo data iji mee mkpebi ụfọdụ.
Ọ bụrụ n ’iji ezi nkeji iri atọ ruo iri anọ na ise nyere ndị otu gị aka ka ha biputere akwụkwọ ma chee echiche banyere rose, akụrụngwa, ma ọ bụ ogwu, enwere ike ịhapụ gị nchịkọta nke nnyapade ederede ebe niile. Site n'ime ka echiche gị niile pụta na ederede ederede agba na ịhazi ha, ị ga-ahụ ụfọdụ isiokwu ga-apụta na ị hụbeghị mbụ.
Ka ị na-ebugharị ihe ndetu gị na edemede ndị a, ị ga-ahụ ụfọdụ nnukwu isiokwu bidoro mewe. Ikekwe ị ga-ahụdị otu nke ga - acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ… na - enyere gị aka ịhụ ebe mgbochi ahụ dị ka ị wee nwee ike ikpebi otu ị ga - esi gafere ya nke ọma.
Aga m agba gị ume ka ị gaa nkuzi, lelee vidiyo, ma ọ bụ ọbụlagodi zuta akwukwo na Design Design, ọ na-enwoghari ụzọ azụmaahịa si arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere ndụmọdụ ọ bụla, biko hapụ ha na nkwupụta!